सामान्य Rokhlin: जीवन र मृत्यु
मात्र आफ्नो छोटो जीवनकालमा तर मान्छे को सामान्य Rokhlin rivlekal ध्यान को मृत्यु पछि। जीवनको यात्रा, त्यो खोज छ र संघर्ष भयो देश भर जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर। बलियो सेना, उन्नत विज्ञान, एक स्थिर अर्थव्यवस्था - मानिसजातिको फाइदाको लागि सबै।
लेव Yakovlevich Rohlin काजाकिस्तान मा जुन 6, 1947 जन्म भएको थियो। आमा भविष्यमा सामान्य, साथै आफ्नो तीन दाजुभाइ, एक ल्याए। चाँडै उनको छोरा को जन्म पछि राजनीतिक कारण Rokhlin पिता पक्राउ गरिएको थियो। लेवी Rokhlin 10 वर्ष जीवन, परिवार ताशकहरुट सारियो। यसलाई त्यहाँ थियो र आफ्नो युवा भविष्यमा प्रसिद्ध सामान्य बिताए।
स्कूल बाट सुरू हुने, Rokhlin उच्च शैक्षिक प्रदर्शन र operability थियो। यो उसलाई प्राप्त गर्न अनुमति सुन पदक। अर्को सामान्य को पछि गठन ताशकहरुट को उच्च सैन्य स्कूल मा प्राप्त, र उच्च सैन्य शिक्षा - अकादमी मा। Frunze, साथै सामान्य कर्मचारी को एकेडेमी मा।
प्राप्त सामान्य सैन्य कौशल भएको जवान अधिकारी स्थिति जारी गर्न इन्कार गरे र तुरुन्तै काम गर्न गए। उहाँले पूर्व जर्मनी मा सोभियत सेना को समूह खटाइयो। यो सेवा Turkestan जिल्ला गर्न आर्कटिक देखि Rokhlin फाले।
1982 देखि 1984 को अर्को सामान्य Rokhlin अफगानिस्तान मा सेवा गरे। उहाँले एक रेजिमेन्ट को एक कमान्डर रूपमा थाले, तर आफ्नो आदेश अन्तर्गत सेवाको दोस्रो वर्ष मा एक विभाजन भएको थियो। व्यक्तिगत म लडाई मा भाग र धेरै पटक नराम्ररी घाइते भएको थियो। तैपनि आदेश उहाँले एक सैन्य सञ्चालन सामना गरेनन् निर्णय र 1983 मा एक परिणाम रूपमा आफ्नो पोस्ट हटाइयो र Motorized पैदल रेजिमेन्ट को उप कमान्डर नियुक्त गरियो। तर उहाँले भन्दा कम एक वर्षमा उत्कृष्ट सेवा अघिल्लो पोस्ट सामान्य लेव Rohlin मा बरामद।
1994 को अन्त - 1995 को शुरुवात Chechnya को जिल्ला सेवा को हिसाब। उहाँले, देश को क्षेत्र मा एक अलग भवन नेतृत्व भाग ग्रोजनी को जिल्लामा लिइरहेको सञ्चालनका एक नम्बर मा र आतंकवादियहरुको संग बातचीत सङ्गठित अभियान मा। धेरै पुरस्कार संग उहाँले इन्कार ग्रोजनी सामान्य Rokhlin मा लड आफ्नो सहभागिता को लागि "रूस को हिरो" को शीर्षक देखि, सेवा को वर्ष प्राप्त।
त्यहाँ रोक छैन, उहाँले आफ्नो राजनीतिक क्यारियर मा काम गर्न थाल्छ। पहिले नै 1995 मा उहाँले दोस्रो दीक्षांत समारोह को राज्य Duma एक उप निर्वाचित भएको थियो। 1996 मा, सामान्य Rokhlin को सामेल राजनीतिक पार्टी "- रूस हाम्रो घर"। यो tandem उहाँलाई को पोस्ट ल्याएको छ Duma अध्यक्ष को रक्षा को।
सेप्टेम्बर 1997 सामान्य को क्यारियर मा एक मोड थियो। यसलाई आफ्नै राजनीतिक पार्टी सिर्जना गर्न fateful निर्णय लिन्छ। यो एक सम्पूर्ण रूपमा सेना को भाग्य र देश चिन्तित छ जो समय, को बलियो विरोध नेताहरूको थियो। तथापि, सहकर्मी र साथीहरूले Rokhlina आफ्नो अनुहार कार्यालय रूस बोरिस Yeltsin को राष्ट्रपतिसँग हटाउन तख्तापलट तयार छ को कुराकानी, Rokhlin आफ्नो पोस्ट हटाइयो भन्ने तथ्यलाई गर्न पुगे।
राति, जुलाई 3, 1998 एक राजनीतिज्ञ मारिए एक गोलीचलेकोआवाज घाउ देश घर मा, उपनगर मा स्थित। को अभियोजन आफ्नो पत्नी, Tamara प्रस्तुत, तर जो सामान्य Rokhlin हत्या, ठीक निर्धारित छैन।
पछि आफ्नो दोष स्वीकार गर्न इन्कार गर्ने लामो परीक्षा Tamara Rokhlin,4वर्ष कैद र 2.5 वर्ष 'परिवीक्षाधीन सुनाइसकेको।
जीवन र सामान्य को मृत्यु बारे केही तथ्य, शङ्कास्पद बाँकी छन्। । उहाँले मृत्यु जसले एल हां Rohlina र कुन उद्देश्यका लागि क्रान्तिको बनाउन चाहनुहुन्छ गर्नुभयो - यो दिन रूस को मान्छे excites।
को Prionezhsky जिल्ला, Karelia गणतन्त्र सामान्य Rokhlin एउटा स्मारक छ। सबै समयको लागि उहाँले एक निष्पक्ष पुरस्कार, छैन पनि जितेको छ आफ्नो मातृभूमि को राम्रो को लागि आफ्नो साहस र selfless सेवा मनाउन।
प्राचीन चीन: आविष्कार। सबैभन्दा प्राचीन र महत्त्वपूर्ण चिनियाँ आविष्कार
भूमि र समुद्र सैन्य बाँध्न भेद गर्न कति टाढा सेना व्यक्ति
Stalinist समाजवाद: मुख्य सुविधा र विशेषताहरु
रूस मा पहिलो राजकुमार। रूस मा पहिलो अगुवाहरू: तालिका
फाईल - यो के हो? सील र टिकटहरू। फिसल - कानूनी बल
सर्वश्रेष्ठ काजल - यो के हो?
रूस मा आधुनिक माइग्रेसन नीति
महिनाको दशक - यो तेस्रो महिना वा दस को समय को अवधि छ
उपयोगी आहार उत्पादन
एक मल रूपमा Sapropel: समीक्षाएँ माली
कम्पनी घण्टामा काम को विधिहरू। तालिका।
जिप्सम बोर्डको लागि डुवेल-तितली के हो?
Tins मा कुकी नुस्खा, समय अतिप्राचीन देखि आ